We could not take our brothers in Islam from Myanmar in distress, according to the Muslim countries’ laws but ironically Christian countries are helping | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် BBC အင်တာဗျူး
A lesson in real harmony by Datin Marina Tun Dr. Mahathir »
قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدۡ عَلِمۡتُم مَّا جِئۡنَا لِنُفۡسِدَ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كُنَّا سَـٰرِقِينَ (٧٣) قَالُواْ فَمَا جَزَٲٓؤُهُ ۥۤ إِن كُنتُمۡ ڪَـٰذِبِينَ (٧٤) قَالُواْ جَزَٲٓؤُهُ ۥ مَن وُجِدَ فِى رَحۡلِهِۦ فَهُوَ جَزَٲٓؤُهُ ۥ‌ۚ كَذَٲلِكَ نَجۡزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ (٧٥) فَبَدَأَ بِأَوۡعِيَتِهِمۡ قَبۡلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسۡتَخۡرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ‌ۚ كَذَٲلِكَ كِدۡنَا لِيُوسُفَ‌ۖ مَا كَانَ لِيَأۡخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ ٱلۡمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ‌ۚ نَرۡفَعُ دَرَجَـٰتٍ۬ مَّن نَّشَآءُ‌ۗ وَفَوۡقَ ڪُلِّ ذِى عِلۡمٍ عَلِيمٌ۬ (٧٦)
စူရာဟ် ၁၂။ အာယသ်အမှတ် ၇၃ ကနေ ၇၆ အထိ ဖတ်ကြည့်ပါ။ နောက်ဆုံးပိုဒ်မှာ ဒီလို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
“Thus we did plan for Yusuf. He could not take his brother according to the king’s law.” (12:73-76)
စီဂျေမှ မိတ်ဆွေများအတွက်သာ ဗဟုသုတ ဝေမျှတာပါ ခင်ဗျား။
ကျနော်မနေ့က တင်တဲ့အကြောင်းက ဒီလိုပါ။
စူရာဟ် ၁၂။ အာယသ် အမှတ် ၇၃-၇၆။
တမန်တော် ယူစွဖ်က အဲဒီအချိန်မှာ အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ပါ။ တမန်တော် ယူစွဖ် အနေနဲ့ ညီတော် ဗီန်ယာမီးန် ကို မိမိထံတော်ပါးမှာ ခေါ်ထားလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အီဂျစ်ရဲ့ အဲဒီခေတ်ကာလက ဥပဒေအရ ဧည့်သည်ကို ခေါ်ထားခွင့် မရှိပါဘူး။ စဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းတာက တမန်တော် ယူစွဖ် ကိုယ်တော်တိုင်က အရှင်မြတ်ရဲ့ နဗီတမန်တော် တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ညီတော်ကို ခေါ်ထားမယ်ဆိုပါက ခေါ်ထားလို့ရနိုင်တယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ သို့သော် တမန်တော် ယူစွဖ် ကိုယ်တော်တိုင် အီဂျစ်ဘုရင်ရဲ့ အမိန့် (ဥပဒေ)ကို မဆန့်ကျင်ခဲ့ဘူးလို့ ကုရ်အာန်က ဆိုပါတယ်။ He could not take his brother according to the king’s law လို့ ဆိုပါတယ်။
အကျယ်တဝင့် သိလိုပါက (အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကောင်းဆုံး ဘာသာပြန်လို့ ညွှန်းဆိုထားတဲ့) သိဗ်ယာနွလ် ကုရ်အာန်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်သိသလောက် တင်ပြတာပါ။ အမှားအယွင်းရှိရင် ခွင့်လွတ်ပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Last 10 yrs ago, I tried very hard for Mg Mg to get EP here. (Forgive me…I am not comparing myself toagreat Prophet. My status is even less respectful thanadust stuck on the prophet’s sole)…Even the Deputy Home Minister asked me why I never invited him to my house. I invited him to go to my house next Sunday…he came with his wife….I just rang up to him when E. KMW visa was refused to extend and his shop ordered to close down. He replied me immediately to write an appeal letter and sent with Mr Ram (the man who KMW used alot). He immediately signed the6mts ext for him, family and business. …But because of repeated use of KMW-Ram for visas…always bypass the Immigration countre staff and officers…directly demanding to see Director with Deputy Minister‘s letters….Imm revenged. At the meeting Imm showed the2files of Chinese women arrested with prostitution (who were staying with Minister’s approval)….So Minister was shy and ordered to cancel all the approvals giving through Raml.) Mg Mg case was one of them… Now we learnt the lesson how to cover the distorted pot with the similarly disfigured cover. Now Mg Mg got UNHCR and Christian countries’ help. Ofcourse Malaysia recognized the UNHCR Reg Cards. Anyway, TQ Malaysia for this kind act.
Tags: Allah, Burma, Deputy Minister, Malaysia, Muslim, Rohingya people, UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees
This entry was posted on November 9, 2013 at 8:30 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.